Oromoo fi Eritrean heedun gara Isreal galuu yaalan Sinai bakka jedhamuuti, Mana hidhaa fi namootan qabaman ajeefaman fi heedun isaan lubun ba'aa waan jiruuf Oromoon kami iyuu gara sinai Egypt akka hin deemne. Oromo Somail, Djibuti, Libya Sudan, Egypt keessa jiran akeekachisa fi Ibsa keenya utuu dhagessan Oromoon kami iyuu gamoojii (Barah) Sinai fi Galan India fi Mederterniyatti seenan akka lubun isaan hin banee isiini dhamna.
Lubu Baqatoota kana bararuuf mariin Gamoo European Parlamaa Keessatti Fulbana 26, 2012 irra hubanee kan nu barsisee yoo jirate lubu. Nami du’aaf murteefate biyya ba’uu Oromoon Biyya isaa hormi samee nyacha jiru, diina isaa Oromiya samee duroome sana samee nyachuu dhisee gamoojii (Barah) keessatti buluqan dhumuu, Galana India fi Medertaraniya keessatti irrabaata Qurxummii ta'uu irra fi kan kana irra hafee Yemen ga'ee Yemenootan Ajeefamuu , dirqisfamee gudeedamuu, hidhamee reebamuu, qalame onee fi kaleen isaa gurguramuu mana, laga abba of keessatti bosona seenan diina samani jirachuun filatama dha. Oromoo kana booda diina lafa isaa irra isaa ari’atefi waan tokko ilee gaduuf hin qabuu, Waan argen bakka argetti diina isaa samee angoo abba biyyuma isaa deefachuu. Qabeenya Oromoo Diini samee nyacha jiru kana wal gurmeesuun diina irra fudhatani nyachuu manna bishantti qurxumiin isiin nyachuun siiri miti dhabadhaa yadaa gara diina keenyatti haa deebinu.
Biyya Yemen keessatti Oromoon akka Bofa du'eetti yamuu lubu isaa waliin fanifamuu, ija isaan abidan gubuu, Mucaan dhiira wagga 2 fi Jarsii waggaa 60 seera uumaman ala dirqisifaman yamuu gudeedaman, Dubarii Oromoo yeroo tokkotti warrana Yemen 100n sagagaluman yamuu irratti rawwatamuu Mootummoon Adunya fi UNHCR irra caalisan jiru. Adunyan irra jiruu kun Adunya dhugga utuu hin tanee adunya Fayida ta'uu ishee baratan Oromoo Yemen deemuuf Galana India keessatti dhumuuf murten tokko ilee barbadamaf hin jiru. Iyyanoon keenya Mootumma Europa fi Adunyatti dhiheefacha jiru ilee furmata fidaa hin jiru.
2. Sudan fi Egypt irra katani Gamojii (Ongee) sana keessatti dhumtuu hin deemna, yoo dabartan ilee Libya keessatti hidhatuu isiin egata.